Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJacqueline Et Marcel
I-cottage enendawo enkulu yokuhlala, amagumbi okulala abanzi, kunye negadi enkulu ibekwe emaphandleni, ijikelezwe ngamadlelo kunye neenkuni. Ifakwe kwindlela yabakhenkethi yeChampagne, ibekwe kwindawo efanelekileyo ukutyelela iDormans, i-Épernay, iReims okanye iParis, iiyure eziyi-1.5 kude.
Kufuphi ne-gîte unokutyelela iinqaba zeChâteau-Thierry kunye ne-Condé-en-Brie, i-cathedral yaseReims, kunye nezindlu ezinkulu zeChampagne.
I-cottage inendawo enkulu yokuhlala kumgangatho ophantsi, enendawo yomlilo, iTV kunye nenkqubo ye-hi-fi. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye uya kuba nayo yonke into oyifunayo xa upheka. Itafile enkulu yegumbi lokuhlala iya kukuvumela ukuba usebenze ngelaptop yakho.
Phezulu, uya kufumana amagumbi okulala amathathu abanzi, onke anendawo yawo yokuhlambela yabucala eneshawa. Amagumbi amabini okulala anebhedi esisigxina kunye nebhedi yesofa. Igumbi lokulala lesithathu linebhedi esisigxina kuphela.
Ngaphandle, ungonwabela i-terrace ene-barbecue kunye netafile yegadi, kunye ne-2500m2 yegadi-yegadi apho abantwana baya kuba nomsindo! Ipropathi ijikelezwe ngamaplanga, ilungele abathandi bendalo abanokuthatha uhambo olumnandi.
Embindini wendalo naseluxolweni. Akukho ngxolo, ukuphumla ngokupheleleyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Jacqueline Et Marcel
Sihlala kanye ecaleni kwe-gîte, kwaye ke siya kufumaneka ukuba siyafuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Chapelle-Monthodon